Dagaalkii Royale - Androidsis | Androidsis
Supercell, oo ah istuudiyaha Finland, ayaa mas'uul ka ah Clash Royale. Ciyaartan ayaa ah mid ka mid ah ifafaalaha ugu weyn ee aan ka dhex aragno dadka isticmaala Android sannadahan. Soo degsashadeeda ku jirta tirada Play Store-ka malaayiin oo waxay noqotay mid ka mid ah cinwaannada tixraaca ee ku jira noocyada ciyaaraha istiraatiijiyadeed.
Haddii aad xiisaynayso Clash Royale, qaybtaan waxaad ka heli doontaa dhammaan noocyada maqaallada ku saabsan ciyaarta Supercell. Wararka ku saabsan ciyaarta iyo cusbooneysiinteeda ama tabaha loo baahan yahay in lagu hor maro. Wax kasta oo aad rabto inaad ka ogaato waxa ku saabsan, waxaad ka heli kartaa halkan.
Baabuurta Mashruuca Tag hadda ayaa lagu heli karaa beta: Ciyaarta tartanka GAMEVIL
by Manuel Ramirez samee Bilaha 12 .
GAMEVIL waxay ku daabacday Google Play Store diiwaangelintii hore ee Project Cars Go, tartanka tartanka ee ...
Tani waa liistada dhammeystiran ee wararka PUBG Mobile 0.15.0 oo leh helikabtarro, fuulitaan iyo waxyaabo kaloo badan
Wax yar ka dib markii aan isku daynay Call of Duty Mobile, laga bilaabo Ciyaaraha Tencent lafteeda, waxaan horeyba gacanta ugu haynaa liistada ...
Munchkin.io waa nooc dagaal oo nooca io ah kaas oo aan ku wajahi doonno ciyaartoy kale waqtiga dhabta ah. A…
Badland Brawl waa ciyaarta cusub ee ka timid abuurayaashii ugu horreeyay ee Badland iyo Badland 2, kuwaas oo ka mid ah barnaamijyada waaweyn ...
Dagaallada Omega: Horyaallada Galaxy-ga ayaa si cad uga cad isha ilaha dhiirrigelinta ee uu Clash bixiyay ...
Magaca caanka ah ee '99' wuxuu u yimaadaa Android sidii Dagaal cusub oo Royale ah oo aan wajahno ciyaartoy badan si aan u guuleysano….
by Manuel Ramirez samee 4 sano .
Battlelands Royale waa sharad cusub oo ka mid ah nooca Battle Royale si wax looga sii adkeeyo ...
by Eder Ferreno samee 4 sano .
Clash Royale waa ciyaar sababtay dhacdo dhab ah oo ka dhex dhacda dadka isticmaala Android. Waxay dad badan siisay caan ...
Supercell's Clash Royale wuxuu sameeyay $ 1.000 billion sanadkii ugu horeeyay
Maalintii Supercell lagu bilaabay gobol ahaan, APK-keeda waxaa lagu balaariyay shabakadaha shabakadaha si loo awoodo ...
Iyada oo wax walba oo dhacay xagaagan oo ay labo maalmood ka harsan yihiin Pokémon GO, waxaan ilaawnay ...
Ragga ka socda Supercell waxay u yimaadeen si ay ugu dhawaaqaan inaysan baabi'in doonin falcelinta ciyaaraha ...